Waxa la sheegay in deegaanka oromiya gobolka wuqooyiga shawa dagmada waro jaarso ay kooxda onag shane 256 guri ku gubeen - ዜና ከምንጩ
Waxa la sheegay in deegaanka oromiya gobolka wuqooyiga shawa dagmada waro jaarso ay kooxda onag shane 256 guri ku gubeen
Waxa wargayska addis maleda uu waramay dadka ku nool deegaanka oromiya gobolka wuqooyiga shawa dagmada waro jaarso in kooxda onag shane ee goolaha wakilada shacabku ay dhawaan ku magacabeen argagaxisda ay halkaasi ku gubeen 256 guri.
Sida uu wargaysku uu ilahaasi xogaha ah uu ka soo ogaaday ayaa todobaadkii la soo dhaafay ee bishan tiqimt ee 2014ka meesha ka baxsan goha siyoon ee loogu yeedho yeju medhhaanealem miyigeeda ay koox hubaysan oo ka tirsan onag shane ku gubeen guryo dhan 256 guri oo ay dadka halkaasi ku nool lahayeen.
Wargayska ayaa isku dayay in uu soo ogaado xiliga falalkaasi la gaystay, sida uu xogta kaga helay ilahaasi ayaa waxa falkaasi la gaystay xili waa bari ah ku dhawaad sadaxdii sibaxnimo. Waxana la sheegay in falalkaasi halkaasi laga gaystay aanay jirin cid ku dhimatay.
Shaqsiyaad aan rabin in magacyadooda la sheego oo halkaasi dagan ayaa sheegay in xiligii dabkaasi la qabadsiiyay guryaha ay afar qof ku dhaawacmeen balse aanay jirin cid ku geeriyootay.
In kasta oo aanay jirin cid ku geeriyootay falalkaasi halkaasi ka dhacay hadana kooxdaasi hubaysan xiligii ay dabka qabadsiisay guryahooda madaama ay awoodi waayeen in hantidoodi ay kala soo baxaan guryaha gubtay wixi hanti ahaa ee 256ka guryi ku dhax jiray oo dhami way gubteen. Falalkaasi loo gaystay dadki halkaasi dagana ee guryahoodi la gubay waxa ay uu kala carareen meelihi uu dhawa iyo duurka dhaxdiisa sida xogta ilhaasi halkaasi ku nool ay sheegen.
Falalka danbi ee guroyo gubista ah ee halkaasi ay ka fulisyeen kooxda onag shane waxa ku guryo waayay 256 qoys, ilaa iyo xiligii la soo diyaariyay warkanna waxa halkaasi ka barokacay guud ahaan dad gaadhaya 5kun iyo 54 qof oo halkaasi ku noola. Sida lagu soo ogaaday xogta ay sheegeen dhalinyaro halkaasi ku nool oo aan rabin in magacyadooda la sheego.
Dhalinyaradaasi waxa kale oo ay sheegeen in kooxda onag shane ay bilaabeen weerarada ay halkaasi ku soo qadayaan sanadkii 2013kii oo ilaa iyo xiligii halkaasi laga soo diyaariyay warkan in aanay cidanka qaran halkaasi joogin. Waxaana ay cida ay khusayso arintai ay ka codsadeen in ciidanka qaranku uu halkaasi yimaado oo uu ilaalo uu sameeyo.
Waxa kale oo ay wargayska uu sheegeen in xiligii weeraradaasi lagu soo qaaday ay dadka halkaasi ku nooli ay hurdeen oo ay dhib ku noqotay in ay iska difaacaan weeraradaasi.
Waxa kale oo ay dadka halkaasi dagani sheegeen in xiligii weeraradaasi lagu soo qaaday ay dadku ka war la’ayeen markii guryohooda la gubayna in ay naftooda uun badbaadiyaan mooye in ay hantidooda iyo guryahoodaba ay badbaadiyaan wakhti bay uu wayeen.
Sida ay sheegeen dadka halkaasi ku nool in kooxda onag shane ay halkaasi joogaan oo ay dawladana ka rajaynayaan sidii loo caawin lahaa ee loogu soo gurman lahaa.
Wargayska addis maleda ayaa isku dayay in uu wax ka soo ogaado arinta ku saabsan dabka halkaasi ka kacay waxana uu tilifoon kula xidhiidhay gudoomiyaha dagmada waro jaarso mudane Ayele Mengistu, balse tilifoonkiisa oo uu qaadi wayay awgeed oo markii danbena uu damiyayba ayaa waxa uu suurtoobi wayday wargayska in uu arintaasi wax xog ah ka uu soo helo gudoomiyahaasi.
Total views : 7512321